ITIL: Farqiga u dhaxeeya maareynta dhacdada iyo maaraynta dhibaatada
ITIL: Farqiga u dhaxeeya Maareynta Dhacdada iyo Maareynta Dhibaatada
Sida ITIL ay u kala duwan yihiin Dhibaatooyinka iyo Dhacdooyinka
Waa maxay Dhacdo ku jirta ITIL?
Maxay tahay dhibaatada ITIL?
Waa maxay Xiriirka u dhexeeya Dhibaatooyinka iyo Dhibaatooyinka ku jira ITIL?
Waa maxay sababta ay ITIL u kala duwan yihiin Dhibaatooyinka iyo Dhibaatooyinka?
SideeITIL Waxay kala saaraan dhibaatooyinka iyo dhacdooyinka
Fahamsanaanta fasalada ITIL® inta badan waxay u maleynayaan in imtixaannadooda ay ku kala duwan yihiin dhacdooyinka iyo dhibaatooyinka. Si wax looga qabto arrintan oo ay bixiso iftiin, blogkan ayaa kala soocaya farqiga u dhexeeya dhacdooyinka iyo dhibaatooyinka, sida ay ku xiran yihiin, iyo sababta ay u saameynayso.
Sida lagu tilmaamayo ITIL, dhacdadu waa khalkhal kufilan adeeg ama khilaafka nooca adeega. Waa maxay had iyo goor go'aamiso amarka wax sida dhacdada ah iyada oo aan loo eegin haddii heshiiska adeegga (SLA) uu jabsaday. Noqo sida ay tahay, ITIL waxay tixgelinaysaa kor u qaadista xitaa kahor intaan SLA la jebin si loo yareeyo xiritaanka ama saameynta la filayo.
Marka la eego shuruudaha laymanka, waa dhacdo muujinaysa mugdiga.
Sida ay tilmaamayso ITIL, dhibaatadu waa asal ahaan asal ahaan ugu yaraan hal dhacdo. Dhibaatooyinka waxaa la soo saari karaa marka la eego ugu yaraan hal arin, ama waa la soo qaadi karaa iyadoo aan la helin dhacdo isbarbardhig leh.
Marka la eego shuruudaha shaqsiyadeed, dhibaatadu waa muujinta sababaha ama sababaha suurtagalka ah ama ugu yaraan hal xoqitaan.
Sida caadiga ah, xidhiidhka ka dhexeeya labada ayaa ah in hal dhibaato ay tahay sababta ugu yaraan hal dhacdo. Xaalad waliba, waxay u muuqan kartaa dhacdo (ama ururinta dhacdooyinka) kaas oo abuuray wax ka badan hal dhibaato.
Ujeedada aqoonsiga dhacdooyinka iyo dhibaatooyinka waxay la mid yihiin duruufaha kala go'a iyo dhamaadka natiijooyinka. Dhibaatooyinka waa sabab, iyo dhacdooyinka waa saameynta.
ITIL waxay ku boorineysaa ururada in ay aqoonsadaan waxyaabahan iyada oo la eegayo xaqiiqda ah in labadaas si joogto ah loola dhaqmo oo loo xaliyo hab aan la filayn. Xaalad la xidhiidha dhacdooyinka dhab ahaantii waxay sheegaysaa in adeeg kasta oo waxyeello u geystay ay si lama filaan ah dib u dhisteen. Taas micnaheedu maahan in dhacdadu aanay ku celin doonin si dhakhso ah ama ka dib. Marka aan dhaho "dhacdo ahaan," xusuusnow in ay macnaheedu noqon karto hal daqiiqo ama sanado 10. Xaqiiqda arrintu waxay tahay in go'aan laga gaaro xaalad aan la beddelin.
Dhibaatooyinka, xaalad kastaa, waa sababaha dhacdooyinka. Waxaan isticmaali karnaa habab kala duwan si loo kala saaro asalka rootiyada ee dhibaatada ahna ugu dambayntii xalinta dhibaatadan. Marka la eego marka go'aan laga gaarayo, maaraynta isbeddelka waxaa lagu dhejiyaa iyadoo la eegayo xaqiiqda ah in la ogaado ilaha asaasiga ah ay inta badan ku lug leedahay halis halis ah.
Maareynta dhacdo xoog leh waxay damaanad qaadeysaa in adeeg bixiyaha aad adigu dammaanad qaadi karto damaanada aad adigu ka sameysey SLA-gaaga adoo siinaya nidaam si dhaqso ah dib loogu soo celiyo adeegga marka ay aasaas u tahay. Maaraynta dhibaatadu waxay damaanad qaadeysaa in adeeg bixiyuhu uu si xushmad leh uga jawaabi karo dhacdooyinka ujeedada ah in aysan ku celin oo si haboon u ilaalin karin dhacdooyinka.
Kuwani waa nidaamyo gaar ah maaddaama ay si joogto ah ugu baahan yihiin noocyo kala duwan oo jimicsi iyo jimicsi. Maareynta waxqabadka waxay u baahan tahay in si dhakhso ah dib loogu soo celiyo adeega iyada oo la raacayo SLA kasta oo la sameeyay laakiin in maaraynta dhibaatadu u baahan tahay in la dilo ilo asal ah oo asal ah. Xaaladaha qaarkood si sharci ah loola tacaalo dhibaatada, waa in adeeg bixiyaha uu keeno ama sii balaariyo xayiraadda hadda jirta.
Ogolaansho waxay adeegsanayaan nidaamka maaraynta dhibaatooyinka iyo istaraatijiyadaha iyadoo loo eegayo jawigooda shaqadooda gaarka ah ee la kulmayo koorsada Maaraynta Dhibaatada. Tani aan ansixineynin, waxay ka shaqeyneysaa habka waxbarasho ee loo eryey oo siinaya bartayaasha qalabka ay u baahan yihiin ee codsiga ITIL la xaqiijin karo.
Taageerada iyo falanqaynta hawlaha ITIL